October 2018 – Nagarik Network
बिद्यासुन्दरका १०१ चुनावी वाचा : एक पछि अर्को झुट प्रमाणित हुदै
स्थानीय तहको मतदान हुनु पूर्व काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य निकै चर्चामा थिए। कारण थियो उनको चुनावी घोषणपत्र । आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरुभन्दा चार कमद अघि बढेर शाक्यले अफु निर्वाचित भएको पहिलो १०० दिनमा १०१ काम गर्ने घोषणा गरे। धेरैले उनको घोषणलाई चुनाव जित्ने मेलो भने पनि काठमाडौंका जनताले त्यसलाई बिश्वास मात्र गरेनन्, उनलाई अत्याधिक बहुमतले जिताए।
तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, एक दिनमा एक काम गर्ने प्रतिबद्धता दिएर जनताको मत लिएका शाक्यले १७ महिना बितिसक्दा पनि एकाद प्रतिबद्धता बाहेक खासै केही गर्न सकेका छैनन् ।
Bhogatey Don – What’s Trending | Ep.4| यो हप्ता के रह्यो चर्चामा?
राजधानीका सडकमा अब विद्युतीय बसहरु गुड्ने भएका छन्। सहरी यातायातमा ‘मास ट्रान्पोर्टेसन’लाई सरकारले प्रवर्दन गर्न थालेपछि सक्रिय भएको साझा यातायात प्रालिले काठमाडौंमा विद्युतीय बस सेवा सुरू गरेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई दसैंको अवसरमा टीका लगाइदिँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । सो तस्बिरमा सोफामा बसेकी राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो अगाडि घुँडा टेकेर बसेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई टीका लगाइदिँदै गरेको देखिन्छ।
नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म यस्ता घटना सामान्य नै मानिन्थे । तर राजतन्त्र नेपालको हितमा नरहेको निष्कर्षसहित त्यसलाई फालेर ल्याइएका गणतन्त्रमा समेत राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति भण्डारी) बाट राजसी प्रवृत्ति देखाइएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।
बढुवा नहुने भएपछि सशस्त्रका एसएसपीको राजीनामा
बढुवामा सशस्त्र प्रहरी नियमावली बाधक भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी सञ्जयविक्रम राणाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त ६ डिआइजी पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै राणाले राजीनामा दिएका हुन्। विपत् व्यवस्थापनको प्रमुख रहेका एसएसपी राणाले सोमबार राजीनामा दिएको बताए।
आफूलाई बढुवा नगर्न सशस्त्र नियमावली परिवर्तन गरिएको र पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ। ‘नेपाली सेनाबाट २०४६ सालमा सेवा प्रवेश गरेको हुँ। सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सशस्त्र प्रहरीमा सेवा स्थानान्तरण भएको हो, मैले कसैको भाग खोस्न खोजेको होइन । मेरो पालो आयो, बढुवा दिनुस् भनेको हुँ’, राणाले भने ‘अन्याय सहन सकिनँ।’
निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याको छानबिनमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई निष्काशनको सिफारिस गरेको छ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवम् प्रवक्ता थापाले गृह मन्त्रालयले उक्त सिफारिस उपर आज निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।
वसन्तपुरमा एकै दिन १३ लाख आम्दानी
सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रहेको स्थान वसन्तपुरमा पर्यटकको संख्या बढेपछि एकै दिन करिब १३ लाख आम्दानी भएको छ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा विस्तारै पुनःनिर्माणले गति लिइरहेको बेला पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएकाले आम्दानी बढेको हो। घुम्न आउने पर्यटकबाट मङ्गलबार मात्रै १३ लाख आम्दानी गरेको हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख उदयबहादुर पसखलले जानकारी दिए। अन्य दिन सामान्यतयाः दैनिक १० लाख आम्दानी गर्दै आएको छ।
सार्क राष्ट्रबाट आउने पर्यटकको संख्या ८२ अन्य देशबाट १ हजार २६९ जना पर्यटक घुम्न आएका थिए। यसै कारण यो वर्ष अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी शुल्क पनि त्यसै दिन १२ लाख ८१ हजार ३०० जम्मा भएको हो। यहाँ विशेष गरी चीन, जर्मन, फ्रान्सलगायत देशबाट पर्यटक घुम्न आउने गर्दछन्।
कर्णाली प्रदेशको ठूलो ताल रारामा यस याममा रारा जानेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। दसैं र तिहारको बीचमा बिदा हुने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको हो। पर्याप्त होटल, लज नहुँदा दैनिक सरदर १५ सय पर्यटक रारामा जाने गर्दा खान बस्नका लागि असुविधा हुने गरेको छ।
देशका विभिन्न स्थानबाट दैनिक ३०० मोटरसाइकल, १५० जीप तथा १० बस जाने गरेको गोठीजिउला प्रहरीचौकीका प्रहरी हबल्दार दीर्घराज अधिकारीले बताए। राराको हुटुमा डाँफे होटल तथा हेरिटेज होटल, माझघट्टमा रहेको होमस्टे, मृर्माटप होटल, रारा भ्यु होटलको क्षमताभन्दा बढी पर्यटक हुने भएकाले कोही त्रिपालमा, कोही गाडीमा र कोही आगो बालेर रात बिताएको बारा निजगढबाट आएका आन्तरिक पर्यटक निर्मल भण्डारीले गुनासो गरे।
विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी शुक्रबार नेपाल ल्याइँदै
इङ्ल्याण्ड र वेल्समा आगामी वर्ष संयुक्तरूपमा आयोजना हुने अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी शुक्रबार नेपाल ल्याइँदैछ। आइसिसीकी नेपाल प्रतिनिधि एवं क्यानकी पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेका अनुसार विश्वकप ट्रफी बङ्गलादेशबाट शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने छ।
ट्रफी नेपालमा चार दिन राखिनेछ। नेपालमा रहँदा ट्रफीलाई स्वयम्भू, पोखरा र चन्द्रगिरिमा पुर्याइनेछ। पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट (पिपिएल)का लागि सबै खेलाडी र क्रिकेटसम्बद्ध व्यक्ति पोखरामा रहेकाले ट्रफी पोखरा लैजान लागिएको हो।
समुद्रमाथि बनाईएको विश्वकै लामो पुल सञ्चालनमा
चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले विश्वको सबभन्दा लामो ‘मेगा ब्रिज’ को मङ्गलबार औपचारिक उद्घाटन गरेका छन्। सामुद्रिक पुलले हङकङ, मकाउ र चीन जोड्ने भएको छ। चीनका ती स्वशासित क्षेत्रहरुसँगको सम्बन्धलाई चीनले पछिल्लो समयमा कडा गरिरहेका बेला चीनले यो पुल निर्माण गरेको छ।
समुद्रमाथि निर्मित यो पुल ५५ किलोमिटर लामो छ। चीनका राष्ट्रपति चिनफिङले मङ्गलबार सो पुल उद्घाटन गरेका हुन्। उक्त उद्घाटन समारोहमा मकाउ र हङ्कङका उच्चस्तरीय नेताहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
खशोग्गीको हत्यारालाई कठघरामा उभ्याइने साउदी अरब
पत्रकार जमाल खशोग्गीको हत्यारा जो भएपनि उसलाई कडा कानूनी सजाय हुने साउदी अरबले जनाएको छ।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पत्रकार खशोग्गीको हत्यामा सम्लग्न जो कोही भएपनि उसलाई कानूनी दायरामा ल्याइनेछ।”
राज्य सञ्चालित एसपिए न्यूज एजेन्सीलाई प्राप्त मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “साउदी अरबले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सम्भावित उपायहरूलाई अवलम्बन गरेको छ र घटनामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्लग्न सबैलाई कानून बमोजिम सजाय दिइनेछ।” खशोग्गीको इस्तानबुलस्थित साउदी अरबेली महाबाणिज्य दूतावासमा गत अक्टोबर २ मा हत्या गरिएको थियो। तर उक्त हत्या कसले र के उद्देश्यले गरेको थियो अझै अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको छ।
डलर सामु रुपैया इतिहासकै कमजोर हुनुमा यस्ता छन् कारण
केही महिना यता डलरको तुलनामा नेपाली रुपैया निकै कमजोर भएको छ । अघिल्लो वर्ष १ डलर किन्नका लागि ९० रुपया तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले १ डलरको भाउ ११९ रुपैया पुगेको छ । रुपैया कमजोर हुँदा बिशेषगरी विदेशबाट आयात गरिने समानको भाउ आकाशिएको छ भने नेपालजस्तो आयतामुखी अर्थतन्त्रलाई ज्यादै प्रतिकुल असर परिरहेको छ । आखिर किन नेपाली रुपैया यति कमजोर भयो ?
Manoj Gajurel Comedy – ट्राफिकले दशैंको संकेत दिँदै
दशैं आएको थाहा पाउने उपायहरू पनि छ ।
पहिलो उपाय, शहरमा चोरहरू र लुटेराहरूको बिगबिगी बढ्न थाल्छ, तब थाहा पाए हुन्छ, दशैं नजिक आउँदै छ ।
त्यस्तै अर्को उपाय, अहिले ठाउँ ठाउँमा ट्राफिकले दशैंको संकेत दिइसकेको छ ।
ढुक्क हुनुस् ! केहि नहुन्जेल, केहि पनि हुँदैन।
Dhukka Hunus – Manoj Gajurel Comedy
खसी बजार । खसी किनिरहेका मानिसहरू । भाउ सोध्दै गरिरहेका मानिसहरू । खसी यताउति चलिरहेका दृश्यहरू । त्यही दृश्यहरू बीच मनोज गजुरेलको प्रवेश । यो बजिया दशैंमा खसी नकाटी नहुने नियम कसले चलाएको होला हँ ? पाए त त्यसैलाई खसी बनाइदिन्थेँ म । दशैं भने पछि दशैं मात्रै माने त भइहाल्यो नि । बीचमा खसी किन चाहियो ?
अहिले कहाँ छुनु खसीको भाउ ? सरकारले त भाउ घटाउ भनिरहेको छ । तर सरकारले भनेको खसीले टेरे पो । भाउ त झन् झन् पो बढाइरहेको छ ।
बरु यसपाली कमरेड बामदेव गौतमले चाहिँ राम्ररी दशैं मान्ला कि जस्तो देखिया छ । किनभने दशैं आउन अगावै उहाँले एउटा राम्रो खसी पाइसक्नुभएको छ । सुनिन्छ, पार्टीले नै उहाँलाई त्यो खसी उपलब्ध गराएको रे ! खसी पनि अहिल्यै पर्सी पनि सकेको छ रे !
ढुक्क हुनुस् ! केहि नहुन्जेल, केहि पनि हुँदैन। चाँडै आउदैछ। #DhukkaHunus #ComingSoon
Nepal Law- Muluki Ain Explained, १६५ वर्ष पछि फेरिएको मुलुकी ऐनको किन बिरोध ?
यही भाद्र १ गते देखि नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता ऐन लगायतका कानून लागू भयो । सो कदम नेपाली न्यायीक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण कदम थियो। यसले १६५ वर्ष अघि जंग बहादुर राणाको शासनकालमा जारी मुलुकी ऐनको विधिवत विसर्जन गरेको थियोे ।
तर उक्त कानून जारी भए लगत्तै डाक्टर, पत्रकार, र नागरिक समाज लगायत धेरैले खुलेरै बिरोध गरे। उक्त बिरोध पश्चात सो ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान संशोधन हुने क्रममा छन् । आखरी के कारण विभिन्न पेसाकर्मीहरु मुलुकी ऐनको बिरोधमा उत्रिए ? नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार ल्याइएको उक्त ऐनमा के छ र प्रत्येक नेपालीका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ? नागरिक ३६० को यो शृङ्खलामा हामी यिनै बिषयमा रहेर चर्चा गर्दैछौ ।
५ वर्षपछि बाध्यताले विदेशिने अवस्थाको अन्त्य, Foreign Employment from Nepal
श्रममन्त्रीले भने झैँ ५ वर्षपछि बाध्यताले विदेशिने अवस्थाको अन्त्य होला ?
केही वर्षयता विदेशिने कामदारको संख्यामा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । अझ साढे चार महिनादेखि नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मानिने मलेसिया बन्द छ । श्रम रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट भने ५ वर्षमा बाध्यताले विदेशिने अवस्था अन्त्य हुने दाबि गर्छन । मुलुकमा रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरु नभैरहेको बेला के ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएला ?
कल गर्ल भन्छन् “विर्सेर पनि सेक्स वर्कर नबन्नु “
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन ३ जना एचआइभी संक्रमीत भइरहेका छन् । एचआइभी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका समूहहरु सुईद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्नेहरु, यौनकर्मी, पुरुष समलिगंी तथा तेस्रोलिगीहरु, रोजगारीका लागि विदेशिनेहरु र कारागारका कैदीहरु छन् । जसमध्ये सुइद्वारा लागूपदार्थ प्रयोग गर्नेहरु र पुरूष समलिंगी यौनकर्मीहरुमा अरु समूह भन्दा एचआइभी संक्रमण हुने उच्च जोखिम रहेको छ ।
हरेक व्यक्क्तीका जीवनमा आफ्नै भोगाइ र सिकाइ हुन्छन् । कसैले जीवनका भोगाइबाट सिकेर जीवनको गोरेटोलाइ परिवर्तन गर्न चहान्छन् भने कसैले चाहेर पनि परिर्वतन गर्न सक्दैनन् । राजधानीका सडक देखि महलसम्म सेक्स वर्करका रूपमा कति छन् भन्दा यसको यकीन तथ्या«ङ छैन । प्राय जसो सडकमा होस् वा ठुला होटेल, फ्ल्याटमा सेक्स वर्कर गर्ने धेरै युवायुवतीहरुको परिवारलाइ के काम गर्छन् भन्ने समेत जानकारी हुँदैन । अहिले युवती मात्र होइइन । केहि युवाहरु पनि सेक्स वर्करका रुपमा व्यक्तीगत सम्पर्कमा जानेगरेको पाइन्छन् । धेरै जसो युवतीहरु प्रेमी र श्रीमानबाट पीडा पाएर सडकमा पुगेको भेटिन्छन् । नयाँ ऐन संसोधन भएपछि सडकमा सेक्स वर्करको रुपमा संलग्न रहेको भेटिएमा ३ महिना जेल सजाय सहति १० हजार जरिवाना तोकिएको छ । नयाँ ऐन संसोधन भएपछि यो नियम भदौ १ गते लागू भएको हो । हामीले नागरिक संवादमा कल गर्ल र सडकमा सेक्स वर्करको रूपमा काम गर्ने एचआइभी भएकी युवतीहरुसँग संवाद गरेका छौ ।
कञ्नपुरकी १३ वर्षीया वालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको दोषी पत्ता लगाई कारवाही गर्न माग गर्दै राजधानीको माइतिघर मण्डलामा विराेध प्रदर्शन गरिएको छ।दर्शनकारीले घटना अनुसन्धानमा गृह प्रशासन असफल भएकाे भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालकाे राजिनामा माग गरिएकाे छ।
महिला सांसद प्रति रेखा थापाको आक्रोस, बलात्कारका घटना बढ्दा के खिचडी पकाउँदै हुनुहुन्छ ?
नायीका रेखा थापाले बलात्कारजस्ता घटनाका अपराधी लुकाएर सरकारले के गर्न खोज्दै छ भन्दै आक्रोश पोखेकी छन्। कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्यायको लागि गरिएको प्रदर्शनमा थापाले अपराधीलाई करवाही गर भनेर प्रष्ट भाषामा गरेको माग सरकारले नबुझेको भन्दै उनले सरकारले कस्तो खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले सिधा भाषा बुझेन अब न्यायको लागि कस्तो भाषा प्रयोग गर्नु पर्ने हो।’
पछिल्लो समय देशमा महिला हिंसाका घटना बढेको भन्दै उनले आगामी दिनमा महिलाको भविष्य कस्तो होला भन्नेमा आफूहरु त्रसित रहेको बताईन्। न्याय माग्नका लागि विरोध र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद रहेको उनले बताइन्।